Roobow xorriyad ma heli doonaa 1,111 maalin kadib? | KEYDMEDIA ONLINE
Roobow xorriyad ma heli doonaa 1,111 maalin kadib?
Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa Ku simaha Taliyaha NISA, ku amray inuu soo gudbiyo warbixin buuxda oo la xiriirta xariga Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Amniga Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa eedeysane Yaasiin Farey, oo ku magacaaban ku simaha agaasimaha NISA, ku wargaliyay inuu soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta xarigga Sheekh Mukhtaar Roobow.
48 saacadood ayaa loo qabtay hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, in ay faahfaahin buuxda ka bixiso xaaladda Mukhtaar iyo sababta uu u xiran yahay, waxayna Wasaaradda Amnigu xustay in ehellada Roobow ay si joogto uga cabanayaan in aan laga warheyn caafimaadkiisa iyo bad-qabkiisa.
“Waxaa lafarayaa ku simaha NISA in uu soo gudbiyo warbixin dhamaystiran oo laxariirta xariga Mukhtaar Roobow, waxaa lafarayaa ha'yaddu in ay kusoo gudbiso warbixintiisa oo dhamaystiran muddo 48 saacadood gudahood ah”. Ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Ciidamada Itoobiya ay 13-kii bishii December 2018, magaalada Baydhabo ka af-duubay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, kaas oo August 15 2017, si rasmi ah u shaaciyay inuu ka baxay kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab.
Fahad iyo Farmaajo ayaa Roobow xabsiga ku yahay 1,111, [Kun, boqol koow iyo tobon] maalmood, isaga oo aan la geyn wax maxakamad ah, taas oo baal marsan sharciga dalka u yalla iyo guud ahaan qawaaniinta lagula dhaqmo maxaabiista.
Bartamihii bishii 8-aad ee 2017, Mukhtaar Roobow, oo warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala Muqdisho, wuxuuna caddeeyay in xubinnimada Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano iyo 7 bilood ah.
Mukhtaar, wuxuu si aan gambad lahayn u sheegay inuu si buuxda uga soo horjeedo fahamka khaldan ee Al-Shabaab ka heystaan diinta Islaamka, taasina ay sabab u noqotay in ay dhowr jeer ku weeraraan degaanka Aabal oo 18 kiiloomitir u jira Xuddur, halkaasoo uu iyaga kaga gambanayay wixii ka danbeeyay 2013-kii.
Wadahadallo dheer kadib, Mukhtaar, waxaa loo fasaxay xoriyaddiisa oo dhan, wuxuuna dabayaaqadii 2018, go’aansaday inuu isku sharaxo xilka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, hayeeshee, Fahad iyo Farmaajo oo doonayay in ay [adeege gaar ah] geystaan Badhabo ayaa hor istaagay damaciisa siyaasadeed.
Kadib markii ay ku baraarugeen taageerada uu ku dhex leeyahay bulshada Bay iyo Bakool, una muuqatay inuu yahay musharrax ka taageero badan baratamayaasha kale, Farmaajo, wuxuu go’aansaday inuu xuriyaddiisa xaddido, xabsigana ku hayo inta uu xaafiiska joogo, taas oo keentay in isagoo aan wax maxakamad ah la soo taagin uu muddo Saddex sano ah ku jiro qol mugdi ah.
Waqtigaas uu Farmaajo, xabsiga ku hayo Mukhtaar, waxaa xorriyad magaalada ku maraya madaxii hore ee sirdoonka Al-Shabaab, Zakariya Ismaaciil Axmed, kaas oo mar madaxiisa la dul dhigay saddex malyan oo dollar, [$3,000,000] maadaama uu ahaa mid ka mid ah todobadii hoggaamiye ee ugu sarreeyay Al-Shabaab, sida uu sheegay nidaamkii Obama sanadkii 2012-kii.
Farmaajo, wuxuu Zakariye Ismaaciil, u adeegsaday fulinta qorshaha qaarijinta dadka reer Muqdisho, wuxuuna maleegay dhowr weerar oo lagu qaaday Huteellada Caasimadda, wuxuu fududeeyay qaraxyo waaweyn, waxaana ugu danbeyn xaafiiska galay kiiska Qarixii July 24, 2019, ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir, kaas oo uu ku geeriyooday AUN, Guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ‘Yariisow’.
Zakariye Ismaaciil, wuxuu hadda ka mid yahay shaqsiyadka eedeysan ee loo boobayo kuraasta taalla Garbahaarrey, si uu uga badbaado gacmaha sharciga afarta sano ee soo aaddan, hadaba maxay ka dhigan tahaya in Farmaajo uu kursi baarlamaan u boobo Madixii Amniyaadka Al-Shabaab oo ku heyb ah, xorriyadana ka xuyuubiyo Mukhtaar oo mowqifkiisa caddeeyay saddex sano ka hor?.